URaffaella Salierno: «Bonke ababhali abashicilele nabaziwa kumasiko nolimi lwesiCatalan bangaba ngamalungu ePEN Català» | Izincwadi Zamanje
URaffaella Salierno: "Bonke ababhali abashicilele nabaziwa kumasiko nolimi lwesiCatalan bangaba ngamalungu ePEN Català"
U-vlvaro Martínez Majado | | Izaziso, eziningana
Kuyathakazelisa njalo ukukhuluma nalabo abanikela ngemizamo yabo ekuvikeleni inkululeko yabezindaba, inkululeko yokukhuluma kanye namalungelo esintu, kepha izehlakalo zakamuva ezahlukahlukene ezisongele le nkululeko zimema ukuzimisela okungaphezulu kokufunda ngomsebenzi wezinhlangano ezifana nePEN Català.
URaffaella Salierno uqondisa iKomidi Lababhali Ababoshiwe bePEN Català, isigaba seCatalan sePEN International: "kufana nendlu yomama yeZikhungo zePEN eziyi-140-150 emhlabeni wonke," uyachaza. «Umsebenzi wawo empeleni owokuxhumanisa imisebenzi yezikhungo ezahlukahlukene nokubeluleka; ukuhlela imihlangano ejwayelekile noma imihlangano yamakomidi ahlukene akha iPEN (Ikomidi lababhali ababoshiwe, Ikomidi lokuhumusha namalungelo olimi, iKomidi lezokuthula neKomidi lababhali, njll.); ukweluleka ngokuhlelwa kwemikhosi yemibhalo noma eminye imisebenzi yezincwadi, njll. »
Ngubani ongaba yilungu le-PEN Català?
Izikhungo ze-PEN ziqoqiwe zizungeze incwadi, hhayi umbuso wokuphatha. Ngakho-ke, esifundazweni esifanayo kungahle kube nezikhungo ezahlukahlukene ze-PEN. Lokhu kwenzeka eSpain, ngokwesibonelo, futhi sineCatalà PEN, iPAL yaseGalician, iPEN yaseBasque futhi muva nje nePEN yaseSpain. Ngenxa yalokho, bonke ababhali abashicilele nabaziwa ngolimi lwesiCatalan namasiko abo bangaba ngamalungu ePEN Català, kungakhathalekile ubuzwe, isiko, umbala noma inkolo.
Kumele futhi kuvezwe ukuthi ngegama elithi "umbhali" siqonda yonke imisebenzi ehlobene negama elibhaliwe: izimbongi, ababhali bama-eseyi, abahumushi, ababhali bemibhalo, izintatheli, abahleli ...
Ukukhuluma ngqo ngePEN Committee of Incarcerated Writers, ephethe ukusiza ababhali amalungelo abo nenkululeko yabo ephuliwe, kufanelekile ukunaka izinhlelo ezahlukahlukene ezenzayo, phakathi kwazo iRapid Action Network.
Yini okuthiwa yizenzo ezisheshayo? Umuntu ofuna ukusiza angasiza kanjani yize engelona ilungu lePEN angasiza?
IPEN International Committee of Incarcerated Writers iphethe ukuqoqa nokuqinisekisa imininingwane emacaleni ababhali abashushiswayo emhlabeni jikelele. Lolu lwazi luqoqwa ngemithombo eminingi nangokusebenzisana namanye amabhizinisi abhekele ukuvikelwa kwamalungelo abantu. Lapho icala elisha lokushushiswa kombhali liqinisekiswa ngokwephula ilungelo lenkululeko yokukhuluma, i-International PEN ikhipha isenzo esisheshayo, okungukuthi, ithumela imininingwane kuzo zonke izikhungo ze-PEN mayelana nomlobi okukhulunywa ngaye, nayo yonke imininingwane kwecala lakhe. Iphinde ikhombise ezikhungweni ezahlukahlukene uhlobo lwezinyathelo abangazithatha (izincwadi zokubhikisha eziya kuziphathimandla zezwe lapho kwenzeke khona ukwephulwa komthetho; ukukhishwa kwabezindaba; imisebenzi engenzeka ...)
Amalungu angewona awe-PEN angaxhasa i-PEN Quick Actions noma imisebenzi ye-PEN ngezindlela ezahlukahlukene, kuya ngamacala athile. Kungenzeka ngokubamba iqhaza emicimbini ehlelwe yi-PEN, ngemizamo yezokuxhumana noma, ngokwesibonelo, ngokusayina amakhadikhadi esivuna ababhali abashushiswayo, i-PEN ewasabalalisa ngezikhathi ezithile zemicimbi, njengoba sisanda kwenza eMkhosini weKosmópolis08 eBarcelona.
Ukukhuluma ngokusebenzisana namanye amabhizinisi avikela amalungelo abantu: inhlangano ezigabeni zasendaweni i-PEN enayo kufanele ibe lusizo kulokhu. Isebenzisana kanjani iPEN Català nalezi ezinye izinhlangano?
Ubudlelwano ukuhlela imicimbi ngokuhlanganyela, isikhathi ngasinye lapho kuvela khona umcimbi, nazo zonke izinhlaka zokuvikela Amalungelo Abantu. Ungazama ukuhlela isenzo sombhalo noma ubumbano; noma ahlele ukumemezela isihloko esithile; noma nisebenzisane ukushicilela incwadi, njengoba kwenzeka encwadini, U-Anna Politkòvskaia, unembeza wokuziphatha waseRussia, ukuhlanganiswa kwezinye izindatshana ngumlobi wentatheli waseRussia uPEN Català azishicilele kanye namaphilisi eLliga Drets dels Pobles kanye neFederació Catalana d'ONG pels Drets Humans.
Ngesonto eledlule kugujwa iminyaka engama-70 kuhanjwa umtapo wolwazi i-Institut de les Lletres Catalanes lapho ababhali abaningi abasatshiswa uFranco bakwazi ukubalekela khona. Umsebenzi owenziwa ngaleso sikhathi yi-ILC ufana ngokufana nomsebenzi weKomidi Labalobi Ababoshiwe. Yikuphi ukuxhumana okukhona namuhla phakathi kwePEN Català ne-Institució de les Lletres Catalanes?
I-PEN Català, selokhu kwaqala ukutholakala kwe-Institució de les Lletres Catalanes (ILC), eminyakeni engama-25 eyedlule, beyilungu leBhodi Elilawulayo kanye noMkhandlu Wokweluleka kanye namalungu e-PEN abamba iqhaza kumakhomishini wokuhlola we ILC, maqondana nokunikeza uxhaso noma usizo endalweni noma kubashicileli. Ngaphezu kwalokho, ezikhathini eziningi, ihlela imisebenzi yezincwadi, imibukiso noma imibiko, kanye ne-ILC.
Inethiwekhi yamadolobha okuphephela ingezinye zezinyathelo ezivelele zeKomidi Labalobi Abavalelwe. Umsebenzi oncomekayo wokwakha inethiwekhi yomasipala abazimisele ukwamukela ababhali abasengozini kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba awubonakali, kude nawo, kulula ukuwenza. Akekho ongcono kunomxhumanisi wekomidi othatha lo msebenzi ukuchaza ukusebenza kwawo:
I-PEN Català isebenza kanjani ukuthi idolobha lijoyine inethiwekhi yamadolobha okuphephela?
I-PEN Català iyingxenye ye-ICORN, inethiwekhi yomhlaba wonke yamadolobha okuphephela. Ukuqaliswa koHlelo Lwababhali Babaleki eCatalonia kungabhekwa njengomphumela wemvelo womsebenzi wePEN Català ekuvikeleni inkululeko yokukhuluma, futhi nangenxa yomsebenzi wokubonga ukwesekwa okutholwe ababhali baseCatalan, lapho baphoqwa ukuya ekudingisweni ngemuva kwempi yombango yaseSpain, ngabafundisi bamazwe ababengamele.
Idolobha lokuqala laseCatalan ukwamukela uHlelo Lwababhali Babaleki kube yiBarcelona, ​​kepha kunamanye amadolobha akhombise intshisekelo yawo ekusingatheni ababhali abashushiswayo. IPalma de Mallorca neSant Cugat sebevele sebekuvumile esithangamini samalungu onke omasipala ukuqaliswa kwalolu hlelo kumasipala wabo.
Ukuze ube yingxenye yohlu lwababhali i-ICORN efuna idolobha elizosingathwa, umbhali ngokwakhe kufanele athumele isicelo esichaza udaba lwakhe. Lesi sicelo sihlolwa futhi siqinisekiswe yiKomidi Lababhali Ababoshiwe be-International PEN, okuthi uma kunjalo, basiqinisekise. Kusukela kulo mzuzu kuqhubeke, kufunwa idolobha elingamukela umlobi, kucatshangelwa okulindelwe umbhali nalokho kwedolobha elizosingatha. Inhloso ukwenza ukuhwebelana ngamasiko phakathi kombhali nedolobha elisingethe kube inzuzo enkulu futhi enothise kakhulu kubo bobabili.
Kunjalo ukubaluleka kwemisebenzi ye-PEN kangangokuba yaziwa ngisho yiZizwe Ezihlangene: "I-International PEN iyinhlangano engahambisani nezepolitiki futhi inesimo sokubonisana ne-UNESCO kanye ne-UN," kuchaza uSalierno. Le nhlangano kwesinye isikhathi ibizwa ngePEN Club, isisho esisikhumbuza ukuthi akuyona into efana nenyunyana, kepha kunalokho inesifiso sokuba yisithangami sezincwadi nezimo lapho ikhiqizwa futhi isatshalaliswa khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izaziso » URaffaella Salierno: "Bonke ababhali abashicilele nabaziwa kumasiko nolimi lwesiCatalan bangaba ngamalungu ePEN Català"
Uhlelo lwesibili lwe-AlhóndigaBilbao scholarship